७०% मानिसले टोकियो २०२०को ओलम्पिक आयोजना नहुने बताएका छन् | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > NEWS > ७०% मानिसले टोकियो २०२०को ओलम्पिक आयोजना नहुने बताएका छन्
क्योडो न्युजले हालै गरेको एउटा टेलिफोन सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि सर्वेक्षण गरिएको मध्ये ६९.९%ले टोकियो ओलम्पिक निर्धारित समयमा हुनेछ भनेर विश्वास गर्दैनन्। उक्त संख्याले जापानमा आउन लागेको खेलकुदको वरिपरि सामान्य मनोभाव प्रतिबिम्बित गर्दछ। विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले G7 ले टोकियो ओलम्पिक आयोजना गर्न समर्थन गर्ने सहमति भएको बताउनुभए पनि व्यवसाय र स्थानीयहरूले सबैभन्दा खराबको स्थितिको लागि तयारी गर्न सुरु गरिसकेका छन।
ओलम्पिक खेलहरू एक मुश्किल घटना हो जुन व्यवस्थापन गर्न र अधिकतम गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। सही ब्यबस्थापन गर्दा ओलम्पिक एउटा वरदान हुनसक्छ। २००८को बेइजिङ्ग ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको समयमा ठीक त्यस्तै भयो जसले चीनलाई विश्वको वास्तविक आर्थिक शक्तिको रूपमा देखा पर्न सहयोग पुर्‍यायो। अर्को सफलताको कहानी टोकियोमा १९६४को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको समयमा देखा पर्‍यो, जसले जापानको छविलाई पुनः आकार दिन सहयोग पुर्‍यायो। यहि ओलम्पिकले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि प्राविधिक रूपमा विकसित देशको रूपमा पुनर्जन्म भएको भनेर जापानलाई विश्व माझ पस्कियो। सफलताको कथाहरूको छलफल गरियो भने, कोही पनि बार्सिलोना जत्तिकै खुशीयाली हुन सक्दैनन्। स्पेनी शहर दशकौंसम्म ओझेलमा थियो, १९२२को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकले शहरलाई विशाल पर्यटकहरूको आकर्षणमा धकेल्यो जुन त्यो आज छ।
यद्यपि ओलम्पिक श्राप पनि हुनसक्छ। जब मोन्ट्रियलले १९७६मा ओलम्पिक आयोजना गरेको थियो, ७२०%को ज्यादा खर्चले शहरलाई आउने ३० बर्षको लागि ऋणमा डुबायो। २०१६को रियो ओलम्पिकमा पनि ब्राजिलको आर्थिक संकट र जीका भाइरसको प्रकोपको कारण अशान्ति भएको थियो। २०१४को सोची शीतकालीन ओलम्पिक कसले बिर्सिन सक्छ? ५५ अर्ब डलरको कथित रिपोर्ट भएता पनि कुल खर्च ७० अर्बसम्म गएको यो ओलम्पिकको इतिहासको सबैभन्दा महँगो हो।
ओलम्पिक खेलहरू टोकियो र जापानको लागि वरदान हुनसक्छ। टोकियोले तुरुन्तै आफ्नो पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न थाल्यो, अरबौंहरूको लागतले यसले सबवे स्टेशनहरूको मर्मत गर्न, र नयाँ भवनहरू र सुविधाहरूको निर्माण गर्न प्रयोग गर्यो। आशा यो थियो कि १९६४को टोक्यो समर ओलम्पिक जस्तै २०२० को खेलले विश्वले नयाँ टोकियो देखाउनेछ ताकि कम्पनी र पर्यटकहरू टोकियो शहरमा आकर्षित हुनेछन्। टोकियोलाई थाहा थियो कि पूर्वाधारहरूको बूम अस्थायी हुनेछ। तर शहरले ओलम्पिक आयोजना गर्दा लामो अवधिको प्रभाव टोकियोको अर्थव्यवस्थालाई फाइदा पुग्ने र यसको विश्वव्यापी प्रभावलाई मजबुत पार्ने कुरामा जापान विश्वास गर्दछ।
यद्यपि, कोविड १९ ले ओलम्पिकलाई धारासाहि बनाउदै आएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी)का एक वरिष्ठ सदस्यले भने कि आयोजकहरूले ओलम्पिकको भाग्य निर्धारण गर्न मे महिना सम्म कुर्नु पर्नेछ। समाचारले टोकियोमा अनावश्यक तनाव थप गरेको छ। अधिकारीहरू र नागरिकहरूले खेलहरू के हुन्छ भनेर अनुमान लगाउँदै छन्। आईओसीले यो गर्मी टोकियोमा ओलम्पिक खेलहरू आयोजना गर्न प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने कोसिस गर्‍यो, तर जनमतमा यो शंका छ। धेरैको सहमति स्पष्ट छ: जब सम्म कोरोनो भायरस फैलिन्छ, २०२० टोकियो ओलम्पिक हुनेछैन।
अचम्मको कुरा कुरा के हो भने आईओसी ओलम्पिकलाई केहि समय पछि सार्ने ’bout विचार गरिरहेको छैन। यसको सट्टा, आईओसि कि त खेल होस्टिंग हुन्छ वा यसलाई पूर्ण रूपमा रद्द गरिन्छ भन्ने बिचार प्रकट गर्दैछ। ओलम्पिक अर्को महिनामा सर्न नसक्ने घोषणाको बाबजुद जापानका ओलम्पिक मन्त्री सेको हाशिमोटोले “होस्ट सिटी कन्ट्र्याक्ट” लाई ध्यान दिएर हेरिरहेका छन र एक रोचक तथ्य फेला पारेका छन्: आईओसीले ओलम्पिक २०२०मा नगरे मात्र ओलम्पिक रद्द गर्न सक्छ। मन्त्रीले व्याख्या गर्दै भनेका छन्, कि खेलहरू अर्को महिनामा सार्न सकिन्छ जबसम्म तिनीहरू २०२०मा भइरहेका छन्।
आईओसीले प्रसारण अधिकारबाट धेरै पैसा कमाउँछ, त्यसैले ओलम्पिक अर्को महिनामा सार्दा मौद्रिक क्षति हुन्छ किनकि ओलम्पिकले अन्य लोकप्रिय खेलहरू अमेरिकी फुटबल संग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। त्यस कारणका लागि, आईओसीको सम्भवतः यसमा टोकियोसँग टकराव हुनेछ। उनीहरूको लागि, ओलम्पिक अर्को महिनामा स्थगित गर्नु पनी अप्ठ्यारो हो, जबकि जापानको लागि खेलहरू रद्द गर्नु पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य हुनेछ।
आईओसीले पेरिस र लस एन्जेलस ओलम्पिक धकेलेर टोकियोलाई २०२४को ओलम्पिक होस्ट गर्न दिने सम्भावना पनि उल्लेख गरेको छैन। टोकियोले अरबौं डलर लगानी गरेको पर्यटकहरूबाट आउने राजस्वलाई मध्यनजर गर्दै र ओलम्पिक सकिएको सकारात्मक असरको लागि नाफा कमाउने कोसिस थियो। तर अहिले सबै कुरा अन्योलमा परेको छ।
वास्तवमा, ओलम्पिक शायद नै होस्टिंग शहरहरु को लागी कम लाभदायक छ, र यदि ती छन् भने, संख्या सामान्यतया साना हुन्छन्। जे होस्, जब ओलम्पिकले नेट घाटामा नतिजा ल्याउँछ, तिनीहरू विशाल हुन सक्छन्। यदि आईओसीले मात्र टोकियो ओलम्पिक रद्द गर्ने निर्णय गर्यो भने शहरलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुनेछ।
सहरी ओलम्पिक होस्ट गर्न हालसाल सबैभन्दा ठूला र धनी शहरहरूले मात्र बोलपत्र पेश गरिरहेका एक कारण यो छ कि मौद्रिक घाटा शहरहरूले सामना गर्नुपर्दछ। जे भए पनि, यदि सहरहरुमा पहिले नै स्थल र पूर्वाधार छ भने पर्यटकहरुको आगमन को लागी, लागत तल राख्न सकिन्छ। अन्तमा, सडकहरू, स्टेडियमहरू, र रेल स्टेशनहरू मर्मत गर्नु सबथोक नया निर्माण गर्नु भन्दा सस्तो हुन्छ।
तर सबैभन्दा ठूलो मुद्दा यो होइन कि ओलम्पिक जोखिमपूर्ण लगानी हुन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या आईओसीले आफुलाई सर्वशक्तिमान ठानेर कार्य गर्दछ। जब आईओसीले टोकियो महानगरपालिकाको सरकारसँग परामर्श नगरी म्याराथन र दौड ईभेण्ट घटनाहरू सप्पोरोमा सारिदियो भने यो स्पष्ट भयो कि आईओसीले आफूले चाहेको कुरा गर्ने छ। सबै पछि, आईओसीले सबै नियमहरू सेट गर्दछ। यो आईओसी हो जसले टोकियो र पेरिस जस्ता ठाउँहरूमा मौसम परिर्वतन भएर अचाकाली गर्मि बढेता पनि ओलम्पिक गर्मीमा आयोजना गर्नु पर्छ भनेर बताउँछ।
यस बिन्दुमा, शहरहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ, र मेरो मतलब ओलम्पिक होस्ट गर्नको लागि बोलपत्र सबमिट गर्नु अघि वास्तवमै पुनर्विचार गर्नु हो। ओलम्पिक आयोजना गर्नु सधैं जुवा खेल जस्तै हो। तर यदि आईओसीले खेलहरू आयोजना गर्न र आईओसीको इच्छालाई खुशी पार्न अर्बौं डलर लगानी गर्न चाहने सहरहरूमाथि अन्याय गर्न सक्छ भने, खेलहरू आयोजना गर्नुको अर्थ के हो?
नतिजा दुखद छ। ओलम्पिकको सफलतापूर्वक आयोजना गर्न शहरलाई यसका नागरिकहरूको समर्थन आवश्यक छ र टोकियोमा त्यो थियो। ओलम्पिक आयोजना गर्न स्थानीयहरू अत्यन्त उत्साहित थिए; तर वास्तविकतामा लॉटरी टिकटहरू थोरै थिए र स्थानीयहरूलाई प्राथमिकता भने पाएनन्, म्याराथन र रेस खेल पनि होक्काईदोमा सारियो, कोभिड -१९को घटना पनि भयो, र अब आईओसीले यसलाई खेल रद्द हुने खालको बक्तब्य लिएर आएको छ। नतिजाको रूपमा, स्थानीयहरूले उनीहरूको चासो र समर्थन गुमाए जो सुरूमा थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिको बिरूद्ध लड्न शहरहरूको लागि समय आउने छ। यो भनिएको थियो कि आयोजकहरूले कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्न मे महिना सम्म समय छ, अन्यथा खेलहरू रद्द हुनेछन्। मे सम्म निर्णय लिइने छैन त्यसैले टोकियोले आईओसीसँग लड्न तयार हुनु आवश्यक छ। पेरिस र लस एन्जलसका भावी होस्ट शहरहरू, र भविष्यमा खेलहरू होस्ट गर्ने सोच्ने अन्य कुनै शहरहरूको लागि, तिनीहरूले टोकियोमा हुने घटनाहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ र आईओसिबाट पाठ सिक्न आवस्यक छ।